एसियाडमा अाज हुने नेपालका खेल र खेलाडीहरु « Postpati – News For All
कोरोना भाइरस दाङ रोल्पा प्रधानमन्त्री ओली विप्लव नेकपा प्रचण्ड मौसम पक्राउ नेपाली कांग्रेस नेकपा
इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिएका २७९० जनाको फारम रद्द
दसैँ टिकाको साइत सार्वजनिक
दसैँमा घर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदा कति भाडा लाग्छ ? [हेर्नुस भाडादर]
मलेसियामा रोजगारी खुल्यो, के-के छन् मापदण्ड ?
त्रिशूली नदिमा कार खस्यो
वायु प्रदूषण जाँच्न नयाँ मापदण्ड, दबाबमा नेपाल
एसियाडमा अाज हुने नेपालका खेल र खेलाडीहरु
भदौ ३, जाकर्ता । १८औं एसियाली खेलकुद- एसियाडअन्तर्गत आइतबार नेपालले ९ खेलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। नेपालले तेक्वान्दो, फुटबल, फेन्सिङ, ब्याडमिन्टन, उसु, कबड्डी, लन टेनिस, सुटिङ र सेपाकताक्रोमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
नेपालका कमल श्रेष्ठ र पार्वती गुरुङले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यस्तै महिला टिम इभेन्ट्सको पुम्सेमा नेपालले उज्वेकिस्तानसँग खेल्नेछ। कुस्तीमा भागवत साह, सरोज यागद र सुरेश सुनार छन्। फेन्सिङ सावर इभेन्टमा कमला श्रेष्ठ र रविना थापाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
पुल एमा रहेकी कमलाले जापान, मंगोलिया, हङकङ, चीन, इन्डोनेसिया र भियतनामकी खेलाडीसँग भिड्दैछिन्। पुल डीमा रहेकी रविनाले दक्षिण कोरिया, कम्बोडिया र इरानकी खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। यो इभेन्टको फाइनल खेल आजै हुनेछ।
यस्तै, नेपालले कबड्डीमा आयोजक इन्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। टेनिसमा संरक्षकभूषण बज्राचार्यले अन्तिम ६४ को खेलमा इन्डोनेसियाका फ्रिटाडी रफ्कीसँग खेल्नेछन्।
ब्याडमिन्टनको पुरुष टिम इभेन्टमा नेपाल क्वाटरफाइनलमा पुगेको छ। महिला टिम इभेन्टमा भने पहिलो चरणमै पराजित भएको छ,मालदिभ्ससँग। यसैगरी पुरुष फुटबलको समूहगत चरणको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नेपालले आज पाकिस्तानसँग खेल्दै छ।
सुरुका दुई खेलमा पराजित भएको नेपाल पहिलो चरणबाटै बाहिरिने निश्चित भईसकेको छ। उसुको महिलातर्फ ५२ केजी तौल समूहमा जुनी राईले भियतनामकी नगुएन थिथुथीसँग खेल्दै छिन्। यस्तै ६० केजी तौल समूहमा नेपालका मंगलप्रसाद थारुले इन्डोनेसियाका सोफियन अब्दुस हारिससँग भिड्नेछन्।
३ भाद्र २०७५, आईतवार को दिन प्रकाशित
महिला एसियन कप छनोट: नेपाल र फिलिपिन्स भिड्दै
महिला फुटबल: नेपाल र बंगलादेशबीच दोस्रो खेल आज
मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई २-१ ले हरायाे
भारतसँग नेपाल २–१ ले पराजित
भारतले गर्यो नेपालविरूद्ध दोस्रो गोल
नेपाल र भारतबीचको पहिलो मत्रैपूर्ण खेल बराबरी
मौसम पूर्वानुमान: मेघ गर्जन र चट्याङ्सहित वर्षाको सम्भावना
राेल्पामा भिरबाट लडेर आमा छाेरीसहित तिन जनाकाे मृत्यु
दाङमा खुल्यो ५० लाख लागतमा सैलुनसहितको क्याफे
दाङमा खुल्यो एक करोड बढीको लगानीमा ‘नायक मार्ट’
लुम्बिनी प्रदेशका साढे ५२ करोडका २१९ सडक आयोजना खारेज, कुन जिल्लाका कति भए खारेज ?
दाङबाट रोल्पाको गंगादेवका लागि छुटेको ट्याक्सी पल्टियो
© २०१३-२०२१ postpati.com सर्वाधिकार सुरक्षित